ခြစား ခြကိုက်​ ​ငွေစုတ်​ ​ငွေ​ဆွေး​တွေကိုလွှင့်​မပစ်​ကြပါနဲ့ ⋆ The Moon
ခြစား ခြကိုက်​ ​ငွေစုတ်​ ​ငွေ​ဆွေး​တွေကိုလွှင့်​မပစ်​ကြပါနဲ့
by Aung Myo in ဗဟုသုတ
မြို့နယ်​အဆင့်​ ဘဏ်​​တွေ မှာ အဲ့ပုံပါအတိုင်း ခြစား(ခြကိုက်​)​ငွေ​တွေကို သွားလဲ ရင်​ မရပါဘူး။ ဒါကို ဘဏ်​က လဲမ​ပေးလို့ သုံးမရဘူးထင်ပြီး ဖျက်​စီး မပြစ်​ကြပါနဲ့။
ရန်​ကုန်​ ဆူး​လေအနီး လမ်း၃၀ ​အောက်​ ဘ​လောက်​မှာရှိတဲ့ ဗဟိုဘဏ်​​ငွေစုတ်​​ငွေ​ဆွေးလုပ်​ငန်းခွဲ မှာ တရားဝင်​ လဲလှယ်​လို့ရပါတယ်​။
​သွေးစွန်း မှင်​စွန်း မီး​လောင်​ ခြစား ဆီစွန်း အပိုင်းပိုင်းပြတ်​တဲ့​ငွေ​တွေ ကို သတ်​မှတ်​ထားတဲ့ စံညွှန်းနဲ့ကိုက်​ညီရင်​ ပြန်​လဲ ​ပေးပါတယ်​။
ဒါကို မသိပဲ မီးရှို့ဖျက်​စီးပြစ်​လိုက်​မယ်​ ဆိုရင်​ နှ​မြောဖို့​ကောင်းပါတယ်​။
ကျ​နော်​ကိုယ်​တိုင်​ ဗဟိုဘဏ်​ ​ငွေစုတ်​​ငွေ​ဆွေးလုပ်​ငန်းခွဲမှာ ၃ကြိမ်​ သွားလဲဖူးပါတယ်​။
အားလုံးနီးပါး ပြန်​ပြီရတာမို့ ကျ​နော်​​ပြောတဲ့ ​ငွေအစုတ်​ အ​ဆွေး ​တွေကို မဖျက်​စီး ပြစ်​ကြဖို့ပါ။ မိမိပါတ်​ဝန်းကျင်​မှာ ​တွေ့ခဲ့ ဆုံခဲ့မယ်​ဆို ရင်​ ဖြင့်​ ​ငွေဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်​ရ​လေ​အောင်​ကူညီ​ပြောပြ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။
အစိုးရဘဏ်​​တွေ မှာ သာမာန်​ ​ငွေအစုတ်​ အ​ဆွေး​တွေ ဗုဒ္ဓဟူး​နေ့တိုင်း လဲလှယ်​​ပေး​နေတာမို့ ​ငွေ​ဆွေး ​ငွေစုတ်​ ရှိသူတိုင်း သွားလဲ လို့ ရပါတယ်​။
​ငွေအစုတ်​ အ​ဆွေးများနှင့်​ မြို့နယ်​အဆင့်​ ဘဏ်​ခွဲ များမှ လက်​မခံ​သော​ငွေများ အတွက်​ သိလိုသည်​များကို ​မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ..
facebook သုံးရင်း ကုသိုလ်​ယူပါ
မွို့နယျ​အဆငျ့​ ဘဏျ​​တှေ မှာ အဲ့ပုံပါအတိုငျး ခွစား(ခွကိုကျ​)​ငှေ​တှကေို သှားလဲ ရငျ​ မရပါဘူး။ ဒါကို ဘဏျ​က လဲမ​ပေးလို့ သုံးမရဘူးထငျပွီး ဖကျြ​စီး မပွဈ​ကွပါနဲ့။
ရနျ​ကုနျ​ ဆူး​လအေနီး လမျး၃၀ ​အောကျ​ ဘ​လောကျ​မှာရှိတဲ့ ဗဟိုဘဏျ​​ငှစေုတျ​​ငှေ​ဆှေးလုပျ​ငနျးခှဲ မှာ တရားဝငျ​ လဲလှယျ​လို့ရပါတယျ​။
​သှေးစှနျး မှငျ​စှနျး မီး​လောငျ​ ခွစား ဆီစှနျး အပိုငျးပိုငျးပွတျ​တဲ့​ငှေ​တှေ ကို သတျ​မှတျ​ထားတဲ့ စံညှနျးနဲ့ကိုကျ​ညီရငျ​ ပွနျ​လဲ ​ပေးပါတယျ​။
ဒါကို မသိပဲ မီးရှို့ဖကျြ​စီးပွဈ​လိုကျ​မယျ​ ဆိုရငျ​ နှ​မွောဖို့​ကောငျးပါတယျ​။
ကြ​နျော​ကိုယျ​တိုငျ​ ဗဟိုဘဏျ​ ​ငှစေုတျ​​ငှေ​ဆှေးလုပျ​ငနျးခှဲမှာ ၃ကွိမျ​ သှားလဲဖူးပါတယျ​။
အားလုံးနီးပါး ပွနျ​ပွီရတာမို့ ကြ​နျော​​ပွောတဲ့ ​ငှအေစုတျ​ အ​ဆှေး ​တှကေို မဖကျြ​စီး ပွဈ​ကွဖို့ပါ။ မိမိပါတျ​ဝနျးကငျြ​မှာ ​တှခေဲ့ ဆုံခဲ့မယျ​ဆို ရငျ​ ဖွငျ့​ ​ငှဆေုံးရှုံးမှု မဖွဈ​ရ​လေ​အောငျ​ကူညီ​ပွောပွ​ပေးနိုငျ​ပါတယျ​။
အစိုးရဘဏျ​​တှေ မှာ သာမာနျ​ ​ငှအေစုတျ​ အ​ဆှေး​တှေ ဗုဒ်ဓဟူး​နတေို့ငျး လဲလှယျ​​ပေး​နတောမို့ ​ငှေ​ဆှေး ​ငှစေုတျ​ ရှိသူတိုငျး သှားလဲ လို့ ရပါတယျ​။
​ငှအေစုတျ​ အ​ဆှေးမြားနှငျ့​ မွို့နယျ​အဆငျ့​ ဘဏျ​ခှဲ မြားမှ လကျ​မခံ​သော​ငှမြေား အတှကျ​ သိလိုသညျ​မြားကို ​မေးမွနျးစုံစမျးနိုငျ​ပါတယျ​ ခငျ​ဗြာ..
facebook သုံးရငျး ကုသိုလျ​ယူပါ
ဆွမ်းဘုန်းပေးခါနီး အုန်းမောင်းခေါက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ? သိချင်လို့ လိုက်ရှာနေတာ ကြာပြီဗျာ ခုမှသိရတော့တယ်
ကံထူးရှင်တိုင်း ဒီပို့ကိုတွေ့ ခွင့်ရပြီး ဖတ်နိုင်ရှဲနိုင်ပါလိမ့်မည်
ဟန်ဆောင် ကောင်းပြနေပေမယ့် အတွင်းစိတ်ပုတ်မှန်း သိသာထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး
မြတ်စွာဘုရား၏ လေးဆယ့်ငါးဝါ ဝါဆိုရာ ဌာနများ
” ပရိသတ်တစ်ဦးက ပုံတူပန်းချီကို လက်တန်းရေး ဆွဲပေးခဲ့လို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ စူစူလေး …
ပုရိသတွေရင်ခုန်သံမြန်သွားရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ မေရီရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးများ
“သုံးပန်လှ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် ပျူ မြို့ဟောင်းမှာ သွားရောက်လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ ဦးကျော်သူ’
” အဝတ်အစားတွေကို တန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ရွှေကစ်လေး “
ကြည့်နေရင်းရဲ့ ကြက်သီးတွေထသွားရတဲ့ စပွန်စာမမကြီးမြတ်ကေသီအောင်နဲ့ နေတိုးရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း
“ချစ်သူကောင်မလေးကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လောက်အောင် ချစ်နေပါပြီလို့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း”
နူတ်ခမ်းနီမလေးတွေကို အမိုက်စားအထာကျကျ ပုံလေးတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ တိုင်ရွန်
မွေးကင်းစအရွယ် Liam လေးကိုဆေးရုံကနေ ပြန်ခေါ်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဘိုးဘိုးလွင်မိုး
themoonmm.club is your news, entertainment, music & fashion website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.
Categories Select Category Beauty cele food Funny Health Knowledge Lifestyle Relationship Sports Uncategorized ကျန်းမာ​ရေး စစ်​သတင်း ထီပေါက်စဉ် ဗဟုသုတ မိုးလေ၀သသတင်း သုတရသ အချစ်​​ရေး အလှအပ အားကစားသတင်း အနုပညာသတင်း ​ဗေဒင်​ ကြားသိရသမျှ ပြည်​တွင်းသတင်း နိုင်​ငံတကာ သတင်း
© 2019 The Moon. All Rights Reserved.